Qumman / Laab
Hawo / guurto ah
Furaysto-in / Reomte
Qaboojiyaha / Chiller
24 Shuruudaha Solar Chinese wax laga yaabaa inaadan ogeyn oo ku saabsan End of Heat
End of Heat, (Chinese: 处暑), muddo 14-qoraxda ee sannadka, bilaabmaa sanadkan on Aug 23 wuxuuna dhammaadaa on Sep 6. End of Heat oo muujinaysa in qaybo badan ee Shiinaha ayaa la takhalusaya xagaaga kulul iyo dayrta galaya. Laakiin meelaha qaarkood, gaar ahaan South China, dayrta daaho in soo socda iyo dadka waa st ...
Welcome Day QiXiChinese Jacaylka
Festival Qixi The, sidoo kale loo yaqaan Festival Queqiao ah, waa damaashaad Chinese dabaal shirka sanadlaha ah ee gabar cowherd iyo kuwa dharka sameeya ee caddooyinka. Waxaa ku dhacaa maalintii 7-aad ee bisha Labiyo 7aad on jadwalka Shiinaha. Bandhigu wuxuu ka legend ka taataabtay ee ku caashaqay laba, Zhinü ah asalkiisu ka soo jeedo ...
Dusung Qaboojiyaha Major Heat 大暑
The kalandarka dayaxa Chinese dhaqanka qaybiyaa sanadka galay 24 shuruudaha qoraxda. Major Heat, (Chinese: 大暑), muddo 12-qoraxda ee sannadka, bilaabmaa sanadkan on July 23, kuna dhammaataa 6. August Inta lagu jiro Major Heat, qaybo badan oo Shiinaha galaan xilli kulul ee sannadka.
Summer Solstice (夏至) Dusung Qaboojiyaha aad u sheegto 2 wax funny
The kalandarka dayaxa Chinese dhaqanka qaybiyaa sanadka galay 24 shuruudaha qoraxda. Summer Solstice, (Chinese: 夏至), muddo 10-qoraxda ee sannadka, bilowdaa 21 ka Juun ee sanadkan oo ku dhammaataa July 6. In Shiinaha, 24 shuruudaha qoraxda la abuuray kun oo sano ka hor si uu u hago wax soo saarka beeraha. Laakiin th ...
Dragon Doon Festival Holiday ka 7 ~ 9, June ee Qaboojiyaha Dusung
Doon Festival Dragon, oo sidoo kale loo yaqaan Festival Duanwu ah, la xusaa maalintii shanaad ee bishii shanaad sida ay kalandarka Chinese 7-dii, June ee 2019 .Dadka mar walba cuno bur bariis iyo daawado jinsiyadaha doon masduulaagii in ay u dabaal. xafladda waxaa ugu wanaagsan ee loo yaqaan for its jinsiyadaha masduulaagii-doon, e ...
Midho hari (Chinese: 小满 Small Full), Seeds Of Midho Ma Noqoshada Full Laakiin Ma u bislaaday Weli
Midho iyo burooyinkeeda, (Chinese: 小满 Small Full), muddo 8-dii qoraxda gu jir ah, bilaabmaa on May 21 2019, wuxuuna dhammaadaa on June 5. Waxaa loola jeedaa in miraha ka soo hadhuudhka waxa ay noqonayaan buuxda laakiin aan u bislaaday. In Shiinaha, 24 shuruudaha qoraxda la abuuray kun oo sano ka hor si uu u hago wax soo saarka beeraha. Laakiin ...
Dusung Qaboojiyaha Factory Xiritaanka Inta lagu jiro 1aad ~ 4-tii May Waayo Holiday The Of Maalinta Shaqaalaha
Dusung Qaboojiyaha Factory Xiritaanka Inta lagu jiro 1aad ~ 4-tii May Waayo Holiday The Of Maalinta Shaqaalaha, iyo shaqo rusume on 5th, May.
Roob Midho (Chinese: 谷雨), sida xilli ciyaareedkii hore ee guga, bilaabataa on April 20 wuxuuna dhammaadaa on May 5.
Waa maxay Spring maailnta? Dusung Qaboojiyaha ayaa kuu sheegi doona
The kalandarka dayaxa Chinese dhaqameed kala qaybinaya sano ah oo wuxuu galay 24 shuruudaha qoraxda. Spring maailnta The (Chinese: 春分), sida dheer afraad ee sanadkii la soo bilaabo on March 21 wuxuuna dhammaadaa on April 4 sanadkan in 2019.The Spring maailnta muujinaysaa dhererka isku waqti habeen iyo maalinba ah. Maalinta Equatorial Spring ku ...
Dusung Qaboojiyaha keena Spring aad
Dusung Qaboojiyaha keeni Spring aad u ... The kalandarka dayaxa Chinese dhaqanka qaybiyaa sanadka galay 24 shuruudaha qoraxda. Baraaruga ee Cayayaanka (Chinese: 惊蛰) ku dhacaa, Mar 6, kuna dhammaataa on Mar 20 2019 this baraaruga ee Cayayaanka waxay muujinaysaa u kaca ah ee heerkulka iyo kordhay roobka deyrta. Sida s saddexaad ...
# 70 JINSHENG WADDADA ONE, CHENGYANG
DEGMADA, Qingdao, Shiinaha